Ahoana no hamantarana ny maodelin'ny iPhone sy iPad | Vaovao IPhone
Indraindray sarotra ny mamantatra ny maodelin'ny iPhone na iPad an-tanantsika. Indraindray dia mitovy ny fitaovana na dia eo anelanelan'ny taranaka maro samy hafa aza, ary Apple tsy mampiasa soratra eo ambonin'ny fampiasa amin'ny fitaovana mamela antsika hahafantatra mora ilay modely marina. Ary imbetsaka, na eo aza ny fahalalantsika ilay maodely, indraindray izay rehetra ananantsika dia filaharana isa izay tsy haintsika loatra ny manilika ireo anarana fantatsika rehetra. Indraindray ilaina ny fahalalana ireo antsipiriany ireo, ohatra ny misintona sonia manokana, satria misy fisie samihafa izay mifanaraka amin'ny maodely tsirairay, ary mandany fotoana ny fisintomana ilay diso.
Izany no antony nanomananay latabatra sasany izay anananay ireo maodelin'ny iPad rehetra, hatramin'ny taranaka voalohany, ary ny maodely iPhone rehetra avy amin'ny 3GS, miaraka amin'ireo mpamaritra azy avy, ao anatin'izany ny loko sy ny fahaizany misy azy ireo, hahafantarana raha miatrika iPad Mini GSM na GSM + CDMA amin'ny fomba tsotra izahay, ary noho izany fantaro izay firmware mifanaraka aminao ary aza misintona ilay diso. ¿Ahoana no ahafantarantsika izay modely ananantsika? Jereo ao aorinan'ny fitaovanao, ao amin'ireo litera ao. Tadiavo ny kaody izay mifanitsy amin'ny latabatra amin'ny entana ao amin'ny tsanganana «Modely». Ny fitaovana rehetra dia manana izany kaody voasokitra izany.
* Ho fanampin'ireto maodely ireto dia misy ihany koa ireo tsy miankina amin'i Shina: iPhone 3GS A1325, iPhone 4S A1431 ary iPhone 5 A1442.
Ireo vokatra ahitanao ny fiovana "Rev A" dia manondro a fanavaozana izay natao taorian'ny fandefasana ny vokatra. Mitranga izany amin'ny iPad 2G izay mbola amidy, tsy misy afa-tsy amin'ny 16GB sy WiFi capacities, ary ny iPhone 4 izay mbola amidy ihany amin'ny fahaiza-manao 8GB.
Fanazavana fanampiny - IOS 7 Beta 6 Download Links
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana no hamantarana ny maodelin'ny iPhone sy iPad
Ilay hendry dia hoy izy:
Diso anefa izany latabatra izany. IPhone 4 dia manana 16, 32, 64 GB
Mamaly an'i Ellisto
Tsia, voamarina amin'ny pejin'i Apple manokana.
Niditra an-tsehatra aho niaraka tamin'ny 64. Ny tiako holazaina dia ny iPhone 4 voalohany nanana 16 na 32. Fa tsy 8.
iDxtr dia hoy izy:
Eny fantatro. Alefako mandritra ny andro